Fomba telo tsotra hanombohana fanaraha-maso ny marikao an-tserasera | Martech Zone
Raha nanaraka ny fironana amin'ny haino aman-jery sosialy mihitsy ianao dia mety efa naheno zavatra betsaka momba ny fidirana amin'ny “resaka” sy ny fomba fandraisana anjara. Mety efa naheno ilay fampitandremana koa ianao: "miresaka momba ny orinasanao ny olona na eo ianao na tsia". Tena marina izany ary antony lehibe hitsambikinana amin'ny media sosialy ary hanomboka handray anjara. Raha ao anatin'ny resadresaka ianao dia afaka mamaly ny fanontanina, manao fanaraha-maso simba ary manolotra serivisy ho an'ny mpanjifa tsara kokoa.
Ka ahoana no hanohizantsika ny resaka rehetra? Ireto misy zavatra telo azonao apetraka ao anatin'ny minitra vitsy hanombohana hanaraha-maso ny resaka momba ny marikao.
mampiasa Google Alerts. Ity dia mety iray amin'ireo fitaovana tsotra nefa mahomby indrindra azo ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny marika. Google Alerts dia mamela anao hamorona fanairana manokana momba ny teny lakile izay handefa mailaka aminao isaky ny miseho ny atiny ao amin'ny tranonkala misy ireo teny lakile ireo.
Koa satria ny anaran'ny orinasako dia SpinWeb, dia nisy fanairana napetraka hanara-maso ny teny hoe "SpinWeb", izay midika fa mahazo mailaka isaky ny voatonona ao amin'ny tranonkala ny orinasako.
Mametraha fanairana amin'ny TweetBeep. TweetBeep dia serivisy maimaimpoana (mandritry ny fanairana 10) izay manara-maso ny resaka ao amin'ny Twitter ary avy eo mandefa anao mailaka mitanisa ireo bitsika rehetra misy ny teny lakileo. Ny fampandrenesana natsangana ho an'ny "SpinWeb" dia mandefa ahy mailaka isan'andro (na isan'ora, raha tiako) misy ny sioka rehetra miresaka momba ny orinasako.
Mora amiko ny mifantina fifanakalozan-kevitra mahaliana ahy io.
Hizaha tambajotra sosialy amin'ny Fiheverana ara-tsosialy. Ity serivisy ity dia manara-maso tambajotra sosialy mihoatra ny 80 ho an'ny teny lakile, ao anatin'izany ny Twitter, Facebook, FriendFeed, Youtube, Digg, Google sns. SocialMention koa dia manana fiasa fanampiny tsara izay manara-maso ny tanjaka sy ny fitaoman-dresaka.
Raha mitady fomba mora be hanombohana fanaraha-maso ny marika amin'ny alàlan'ny media sosialy ianao, ny fandaniana minitra vitsy hananganana ireo fitaovana telo ireo dia toerana tsara hanombohana. Hatao ho azy ny ezaka ataonao ary hiambina anao amin'izay voalaza momba ny orinasanao. Ho hitanao ihany koa fa manamafy ny fifandraisanao amin'ny Internet izany satria afaka mandray anjara mavitrika ianao isaky ny misy miresaka momba anao, ary serivisy ho an'ny mpanjifa izany.
Tags: fanaraha-maso ny marikafampandrenesana googlefanaraha-masofanairana ara-tsosialysosialy milazafanaraha-maso ara-tsosialy
Niova ny fitondran-tena mividy, ny orinasa kosa tsy niova
Janoary 24, 2010 amin'ny 2:48 PM
Lahatsoratra tsara, Michael!
Ny fanaraha-maso dia fivoaran'ny indostrian'ny media sosialy. Ny fihainoana no dingana voalohany, saingy tsy ampy intsony izany. Ilaina ny fifampiraharahana. Miankina amin'ny zavatra ilain'ny fanaraha-maso sy ny fandraisanao anjara, mety miasa ireo fitaovana etsy ambony ireo, na mety mila mandeha any amin'ny vahaolana mavesatra kokoa ianao. Rehefa manana fahafahana ianao dia tsidiho azafady ny fitaovana Community Insights avy amin'ny Biz360 - fomba tsara hanaraha-maso, fantaro hoe iza no loharanon'ny resadresaka tena misy fiantraikany, mba hahafahanao mandray anjara, ary manolotra asa fifampiraharahana amin'ny hafa ao amin'ny orinasanao (socialCRM). ). Aza misalasala miantso ahy amin'ny fotoana rehetra.